सेन्सर बोर्ड खारेजीको माग : राउन्ड टेबुलमा फिल्म निर्माता
By soniya on	 20th August 2017 नेपाली, समाचार
सेन्सर बोर्डविरुद्ध पटक–पटक आवाज उठ्छ । फिल्म निर्माता बोर्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अघि बढेको बताउँछन् । कलाका अन्य विधामा सेन्सरसिप नहुने तर, फिल्ममा सेन्सर गर्ने राज्यको दोहोरो नीति खारेज हुनुपर्ने माग उठेको छ । यसको नेतृत्व सिनेमा घर संचालकको छाता संस्था चलचित्र संघले लिएको छ । संघले केही दिनमा संचारमन्त्रीसामु सेन्सर बोर्ड खारेजीको मागसहित पत्र बुझाउँदैछ । यसैसाता संघले चलचित्र र सेन्सरबारे छलफल चलायो । उक्त छलफलमा हल संचालक, फिल्म निर्माता, वितरक र पत्रकारले बोले ।
नकिम उद्दिन, संचालक क्यूएफएक्स
सेन्सर बोर्डमाथि विकास बोर्ड हावी हुने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । सेन्सर नियमावलीअनुसार बोर्डमा चलचित्रकर्मी नै हुनुपर्छ । नत्र, चलचित्रको भाषा नै नबुझ्नेले के गर्लान् त ? ठूलो आकारभन्दा पनि पाँचजनाको आधिकारिक टीम सेन्सर बोर्डमा चाहिन्छ । सेन्सर बोर्डको लापरवाहीले गर्दा व्यवसाय गर्न नै झन्झटिलो भएको छ । यसलाई सरल पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बसन्त थापा, फेस्टिभल आयोजक
आजको समयमा सेन्सरसिप चाहिँदैन । अहिले पनि हामी पञ्चायती विरासतको ह्यांगओभरमा बाँचिरहेका छौं । भारत पनि ब्रिटिस राजकै ह्यांगओभरमै छ । सेन्सर बोर्ड राख्नुभनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो । अरु क्षेत्रमा पनि सेन्सरसिप लाग्नुहुँदैन । किन सरकार फिल्मसँग डराउँछ ? के फिल्म परमाणु बम हो ? सबैले समयको आवाज सुनौं ।
कनकमणी दीक्षित, फेस्टिभल आयोजक
हामी लामो समयदेखि पुरातन प्रक्रियामा अल्झियौं । राजनीतिक अस्थिरता र ब्युरोक्रेसी कारणले अघि बढ्न चुक्यौं । अब एक किसिमको राजनीतिक स्थिरता आउँछ र समाज सामन्यीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ । जब सेन्सरसिप हुन्छ तब क्रिएटिभिटीमा ह्रास आउँछ । आफै सेन्सर हुनुपर्ने हो । हामीले भारत, चीन वा अमेरिकामा हेर्नुपर्दैन । हामीले आफैलाई हेरौं । नेपालजस्तो मुलुक बन्द समाज थेग्न सक्दैन जहाँ क्रिएटिभिटी रोकिन्छ र सेन्सर बोर्ड हावी हुन्छ । एक्लै युट्युव हेर्दा जति घातक हुन्छ, सामूहिक हेर्दा अन्तरसंवाद हुन्छ । खुलापन र पब्लिकलाई नजरअन्दाज गर्नुभएन ।
नवीन सुब्बा, फिल्म निर्माता
फिल्ममेकरले बारम्बार परिक्षा दिनुपर्ने स्थिती छ अहिले । फिल्म निर्माताले होइन, राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्राटले जाँच दिनुपर्छ । हाम्रो प्रतिबद्धता, इमान्दारिता र देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाइन्छ । हाँसो उठ्छ । अहिलेसम्म ऐन रिप्लेस गर्न सकिएको छैन । जसले फिल्म उपेक्षित छ । पत्रिकाले लेख्दा सेन्सर नहुने तर, त्यही कन्टेन्टमा फिल्म बनाउँदा सेन्सर हुने स्थिती छ । शासक हुने मनोविज्ञानबाट ब्युरोक्राट र पल्टिसियन बाहिर आउनुपर्छ ।
निश्चल बस्नेत, फिल्म निर्माता
मैले देखेको सेन्सरसिप काट्ने होइन, ग्रेडिङ हो । मैले देशविरुद्ध गएर फिल्म बनाएको छैन । हामी आफै सेन्सरसिप गर्न सक्षम छौं । अब दुई हप्तामा मेरो अर्को फिल्म पनि सेन्सर हुँदैछ, हुने त्यही होला । यसकारण सेन्सर बोर्ड खारेज हुनुपर्छ ।